मदन पुरस्कार प्राप्त कृति ‘दमिनी भीर’ ः एक चर्चा | चितवन पोष्ट दैनिक
मदन पुरस्कार प्राप्त कृति ‘दमिनी भीर’ ः एक चर्चा
२०७० पुष १३, शनिबार ०४:०७ गते
२०६९ सालको मदन पुरस्कार ‘दमिनी भीर’ उपन्यासका लेखक राजन मुकारूङको हात परेको छ । पहिलो उपन्यास ‘हेत्छाकुप्पा’ लेखेर साहित्यको क्षेत्रमा चिनिएका मुकारूङ समाजमा छिटै परिवर्तन भएको देख्न चाहने प्रगतिशील विचारका लेखक हुन् । माझकिराँतको सेरोफेरा र किराँती सभ्यता तथा संस्कृतिको उत्थानका निम्ति दह्रो कलम चलाउने प्रतिनिधि लेखक भने हुन्छ उनलाई ।
‘दमिनी भीर’को सामाजिक परिवेश, स्थान, पात्रहरु र घटनाक्रमले माझकिराँतको कथाव्यथा, राजनीतिक उकुसमुकुस र शोषणबाट मुक्ति पाउन गरिएको युवा आन्दोलनको छनक देखाउँछ । मुलुकको दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र र जातिविशेषको मनोभावनालाई राष्ट्रियस्तरमा उजागर गरी विकासको मूल प्रवाहमा त्यो क्षेत्र र वर्गलाई समाहित गरी सबै नेपाली एकैसाथ अघि बढौँ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको यो उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नु समयोचित सम्मान हो भन्ने लाग्छ ।
जागिरको सिलसिलामा मलाई भोजपुर बस्ने अवसर मिलेकाले म त्यहाँका गाउँबेसी, भीरपाखा र सभ्यता–संस्कृतिसँग परिचित छु । भोजपुरको पश्चिमी भेगको दिल्पा, छिनामख, खावा गाउँ ट्याम्के, दमिनी भीर र त्यहाँका राई बस्तीहरुको यथार्थ चित्रण गर्दै लेखिएको यो ‘दमिनी भीर’ उपन्यास पढ्दा आफूले टेकेको भूमिको सम्झना धेरैपछि पुनर्ताजगी भएर आयो । म रमाएँ, मनमनै राजन मुकारूङलाई धन्य सम्झेँ । म यतिबेला मुकारूङको कृतिको सैद्धान्तिक समीक्षा लेखिरहेको छैन । ‘दमिनी भीर’ पढेर मैले जे पाएँ र जे देखेँ, त्यसको सामान्य टिपोट मात्र प्रस्तुत गर्न लागेको छु ।
अहिलेसम्म नेपालीमा लेखिएका अन्य उपन्यासहरु भन्दा ‘दमिनी भीर’ भिन्न प्रकारबाट लेखिएको कृति हो । आधार कथा, कथा आरम्भ, मध्य कथा, उत्तर कथा र कथान्तसमेत पाँच खण्डमा सम्पूर्ण कथावस्तुहरुलाई समेटिएको छ यसमा । आधार कथामा नै उपन्यासको नामकरण ‘दमिनी भीर’को सन्दर्भ आउँछ, बाँकी अरु खण्डहरुमा माझकिराँतको सभ्यता, संस्कृति, धर्म, राजनीति र रहनसहनलाई समेटेर कथावस्तुलाई जीवन्तता दिइएको छ ।
‘दमिनी भीर’को कथा यस्तो छ– माझ खर्क राईहरुकै बस्ती हो । त्यहाँ फाट्टफुट्ट बस्नेत, गोतामे र दमैका घरहरु पनि छन् । कालीबहादुर बस्नेतको हैकम चल्छ, त्यहाँ । गाउँलेहरुलाई चर्को ब्याजमा ऋण सापटी चलाउँछन् उनले । सुके दमैले पनि उनै बस्नेत काजीबाट ऋण खाएको छ । भाकाभित्र ऋण उठाउन काजी घोडा चढेर सुके दमैकोमा आइपुग्छन् । सुकेले बिहे गरेको भर्खर एक महिना भएको छ । रुप र यौवनले भर्भराउँदी छे दमिनी । काजीको आँखा दमिनीतिरै पुग्छ । दमिनीलाई देखेर मनमनै थुक निल्छन्, कालीबहादुर । सुके दमैले पैसा बुझाउन सक्दैन । दुईपल्ट भाका नाघ्यो, ऋण तिर्न सकेन । दमिनीकै भरमा घर छोडेर आफू कमाउन हिँड्यो, तैपनि उसले ऋण तिर्ने पैसा पठाउन सकेन । दमिनी आत्तिई । बस्नेत काजी फेरि सुकेको घरमा ऋण उठाउन आइपुगे । आँगनमा घोडाको टाप बजेको सुनेर दमिनी झनै आत्तिई । उसको मुटुले ठाउँ छाड्यो । कुर्लिए काजी दमिनीतिर फर्केर । झरे घोडाबाट र समाते दमिनीको हात । ताने आफूतिर, घचेट्दै लगे घरभित्र । ढोका लगाए, दमिनी चिच्यायी । त्यही रात दमिनी घरमाथिको भीरबाट हामफाली, त्यहीँ मरी । गाउँलेहरुले उसको सम्झनामा त्यस भीरलाई ‘दमिनी भीर’ नाम राखे । एउटी निरपराध अबलामाथि गरिएको घोर अपराधरुपी मानव कलंकलाई जिउँदो राख्न दमिनी भीरकै नामबाट राजन मुकारूङले उपन्यासको नामकरण गरेका छन् ।
‘दमिनी भीर’को कथावस्तु माझकिराँतको छिनामख, दिल्पा र खावा गाउँबाट सुरू हुन्छ । गाउँघरको गरिबी, त्यहाँका मानिसहरुको दैनिकी र जीवनशैलीलाई उपन्यासकारले आफ्नै नवीनतम शैलीमा ढालेका छन् । वर्षमा एकचोटि गाउँलेहरु ढाकर बोकेर वेल्टार, चतरा पुगेर नुन, तेल, मसला खेप्छन् । राई युवाहरु भारतीय र बेलायती सैनिकमा भर्ती हुन्छन् । मानिसले बोकेरै मधेसबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ । पछि खच्चरबाट ढुवानी गरिन्छ । लेगुवादेखि चखेवा जोड्ने मोटरको बाटो खनेपछि मात्र ट्याक्टरबाट खाद्यान्न गाउँमा आइपुग्छ । दिल्पाको जगरमान राई श्री ३ चन्द्र शमशेरको पालामा दरबारसँग चिनिएका, जताततै कहलिएका उनैले गाउँमा ५२ झ्यालढोका भएको चारतले घर बनाएर माझकिराँतमा शासनै चलाए । माझ खर्कका पूर्वअञ्चलाधीश शमशेरबहादुर राईको झिँगटी घरलाई समेत उपन्यासले समेटेको छ ।
उपन्यासकारले ‘दमिनी भीर’मा राई जातिको विवाह, भोजभतेर, केटी माग्न जाँदा केटा पक्षबाट गरिने पद्धतिहरु रमाइलो पारामा उल्लेख गरेका छन् । दसैँमा दिल्पा जगरमान राईको घरमा राँगो मार हानेको, साप्रसु ढापको जात्रामा युवायुवतीको मायापिरती, त्यतैबाट मन परेकी केटी घरमा भित्राउने रोचक प्रसंगहरुबाट पाठकहरुलाई यथेष्ट मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ । मागीविवाहको चलन पनि छ, त्यहाँ । विवाहको उमेर पुगेकी हाङ्दिमालाई माग्न राति उनकै घरमा इष्टमित्रहरु आउँछन् । केटीको बाबुको अगाडि एक जोडी कठुवा (सौगात) राख्दै जैकुमारले हात जोडेर ब्रह्माण्डको सृष्टिको कथा सुनाउँछन् । आफ्ना पूर्खा सुम्निमा र पारूहाङको विवाह सम्बन्धबाट मानव सृष्टि भएको कुरा बताउँछन् । छेकुलुङ्मा सावाहाङको बिहे भएको, नागेलुङ र हेत्छाकुप्पाको विवाह भएदेखि नै मागीविवाहको चलन चलेकाले आज हामी त्यही सृष्टि धान्नका लागि परम्पराअनुसार कन्या माग्न आएको कुरा प्रस्ट पार्छन् । जैकुमारको मुखबाट भनाइएको यो किराँती दर्शन र संस्कृति पढ्न र जान्न लायक छ । निहाङ्को मृत्यु हुँदा कान्छीमाया, धौलेकान्छो, हरिहाङको सम्वाद र मृत्यु संस्कारका बारेमा च्याक्टारे कोपाले फलाकेको विधि–विधानका कुराहरुले जोसुकैको मन विरक्त तुल्याउँछ र किराँती मृत्यु संस्कारका बारे जान्न चाहने जोकोहीलाई पनि लाभ हुन्छ । किराँतीहरुलाई बाख्रो चल्दैन, विवाहमा जन्ते राँगो खान पाइयोस् भन्ने पनि यसैको कथा प्रसंगमा उल्लेख छ ।
‘दमिनी भीर’ उपन्यासको दोस्रो कथावस्तु पक्ष राजनीतिक आन्दोलनमा आधारित छ । जनआन्दोलनको प्रभाव दिल्पा, छिनामखु, खावामा पनि परेको छ । बेलाबेलामा त्यहाँ हूलका हूल बन्दुक बोकेका जनमुक्ति सेनाहरु आइपुग्छन्, गाउँमा बस्छन् र त्यहाँका युवायुवतीहरुलाई तानाशाहको विरूद्ध लड्न उक्साउँछन् । केही गाउँले केटाकेटीहरुलाई माओवादी सेनामा भर्ती गरेर मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी गराउँछन् । खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले प्रहरी थानामा बम पड्काएको छ । निसाम, धौलेकान्छो, देउगण, सोमकुमार, हाङ्दिमा, लच्छी र कान्छीमायाहरु काठमाडौँमा समेत लड्न पुग्छन् । क्षेत्रीय र जातीय नारा घन्कन्छ । किराँत राई यायोक्खा, किराँत मुक्ति मोर्चा, लोकतान्त्रिक राई संघको सहभागितामा बनेको छ, ‘किराँत स्वायत्त राज्य, संघर्ष समिति ।’ नामदेङ सक्रिय छ, त्यसमा । अन्त्यमा, जनआन्दोलन सफल हुन्छ । कमरेड ज्वालाको सक्रियतामा चेतनलाई प्रज्ञाप्रतिष्ठानको संगीत नाट्यमा प्राज्ञ बनाइएको छ । किराँत जनसरकार जिन्दावाद, धर्मनिरपेक्ष नेपाल जिन्दावाद ! नारा व्याप्त छ । पेटी बुर्जुवाहरु र अर्धसामन्ती चिन्तनहरु सखाप पारौँ भन्दै हिँडेका छन्, किराँती युवायुवतीहरु । पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधानको माग चर्किन्छ ।
‘दमिनी भीर’ उपन्यास पढेपछि पाठकलाई हुने अनुभूति बुँदागत रुपमा यसरी राख्न सकिन्छ ः
–उपन्यासको लेखनशैली आजसम्मका शैलीहरुभन्दा भिन्न छ ।
–कथावस्तु खासै छैन ।
–छुवाछूत हटाउने, अन्तरजातीय विवाह चलाउने पक्षमा उपन्यास उभिएको छ ।
–जातीय विभेदको नराम्रो गन्ध यसमा छिपेको पाइन्छ ।
–लोकतन्त्रको नाममा जातीय आन्दोलन चर्काइएको छ ।
–उपन्यासले क्षेत्री–बाहुनको उछित्तो लिएर संघीय किराँत राज्य खडा गर्न खोजेजस्तो भान हुन्छ ।
–सुँगुरको मासु र जाँडरक्सी धोकेर खुट्टा लर्बराउनु किराँती संस्कृति नै हो जस्तो गरेर यसलाई अचाक्ली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
–नेपाली समाजले स्वीकार्नै नसक्ने अश्लील शब्दहरु धेरै ठाउँमा प्रयोग भएका छन् ।
अन्त्यमा, राजन मुकारूङको दोस्रो कृति ‘दमिनी भीर’ जन्मियो, यसले मदन पुरस्कार पायो, उपन्यासकारलाई बधाई ! पिछडिएको जात र दुर्गम क्षेत्रको उत्थान गर्नका खातिर सशक्त रुपमा कलम चलाउनु लेखकको धर्म, कर्म दुवै हो । अपठित मानिसलाई चेतनशील बनाएर समाज परिवर्तन गराउन खोज्नु पठित मान्छेको कर्तव्य हो । मुकारूङले जस्तै अन्य जातजातिका लेखकहरुले पनि आ–आफ्ना वर्ग र क्षेत्रका पीडाहरुलाई यसरी नै सबैका सामु उतार्न सक्ने हो भने अवश्य पनि तिनको उपचार हुनेछ । यस अर्थमा ‘दमिनी भीर’ उपन्यासका लेखकले लेखकीय धर्म धानेका छन् । अस्तु ।